Ciidanla DF oo rasaaseeyay dibad-baxayaal ay CC iyo Kheyre hoggaaminayeen - Caasimada Online
Home Warar Ciidanla DF oo rasaaseeyay dibad-baxayaal ay CC iyo Kheyre hoggaaminayeen
Ciidanla DF oo rasaaseeyay dibad-baxayaal ay CC iyo Kheyre hoggaaminayeen
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rasaas lagu furay koox dibad baxayaal ah oo ay hogaaminayeen qaar ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka wakhtigiisa dhamaaday.
Ilo xog ogaal ah oo ku sugan agagaarka koontoroolka KM4 oo ay ku sugan yahiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ayaa Caasimadda Online u xaqiijiyay in ciidamada ay rasaas ku kala eryeen dibad baxayaal ay hogaaminayeen musharaxiin iyo xildhibaano.
Musharaxiinta hogaaminayay dibad baxaan waxaa ka mid ah hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, ra’iisul wasaarahii hore Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo xildhibaano uu ku jiro Mahad Salaad.
Inkastoo aan la ogeyn khasaaraha ay geysteen rasaasta lagu furay dibad baxayaasha hadana waxey arintaan qeyb ka tahay xaaladaha cakiran ee ka jira magaalada Muqdisho, iyadoo dowladda ay isku dayeyso iney hor istaagto dibad baxyada ay iclaamiyeen kooxaha mucaaradka.
Dowladda waxey goor hore la wareegtay goobtii ay midowga musharaxiinta ku balamiyeen dadka rer Muqdisho oo aheyd Daljirka Dahsoon, sidoo kalana waxey xireen wadooyinka ugu waaweyn magaalada, markaanna waxey rasaas ku fureen dad dibad baxayaal ah.
Xaaladda Muqdisho wakhtigaan waa mid aan la saadaalin karin waxa ka dhici doona saacadaha soo socda, waxaana la filayaa in dibad baxayaasha ay ku fidaan qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.